Mafana ny Nosy Grand Bahama amin'ity lohataona ity
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » Mafana ny Nosy Grand Bahama amin'ity lohataona ity
Aprily 19, 2021
Miaraka amin'ny fanokafana efa nandrasana fatratra, fanavaozana ary tsy azo hadinoina ny fifanarahana, iray amin'ireo tsiambaratelo notandremana tsara tany Karaiba ny Nosy Grand Bahama.
Ny Nosy Grand Bahama dia manolotra fialantsasatra mahafa-po indrindra indrindra amin'ny iray amin'ireo nosy akaiky indrindra an'i Etazonia.
Na eo aza ny rivo-doza sy ny COVID, nanamboatra indray ny nosy ary efa manakaiky ny dingana farany ny fanavaozana ny seranam-piaramanidina iraisampiriny.
Ny Lighthouse Pointe malaza dia nanokatra ny vahininy ho anisan'ny fanokafana tsikelikely ny Grand Lucayan Resort.
Iray amin'ireo nosy akaiky indrindra an'i Etazonia, ny Grand Bahama Island dia manolotra fialan-tsasatra Karaiba mety, mora vidy ary feno fitsangatsanganana. Ny Lighthouse Pointe fanta-daza ao amin'ny nosy dia nisokatra indray ho an'ny vahiny, manome trano tsy dia ao an-trano any Karaiba. Miaraka amin'ny tolotra tsy azo hadinoina avy amin'ny fananana maro manerana ny nosy, tsy misy fotoana tsara kokoa noho izao ny manomboka manomana fialan-tsasatra any amin'ny Nosy Grand Bahama.
Misokatra ho an'ny vahiny ny Lighthouse Pointe - Ny 25 martsa, ny Nosy Grand Bahama's Lighthouse Pointe nosokafana ho an'ny vahiny ho ampahany amin'ny fanokafana tsikelikely ny Grand Lucayan Resort, izay hividy sy hanavao ny Royal Caribbean International. Ahitana efitrano fandraisam-bahiny 200 sy trano fisakafoanana maromaro eo an-toerana ny trano. Ireo mpanatanteraka dia nanamafy ny famandrihana mafy talohan'ny fisokafana ary manantena fa hitohy mandritra ny lohataona ka hatramin'ny fahavaratra izany fironana izany.